အစိုးရသစ်မှာ မီဒီယာကို အလေးထားဆက်ဆံသွားမယ် ( ဦးဝင်းထိန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း) ~ .
အစိုးရသစ်မှာ မီဒီယာကို အလေးထားဆက်ဆံသွားမယ် ( ဦးဝင်းထိန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း)
4:13:00 AM အင်တာဗျူးး No comments
အစိုးရသစ်မှာ မီဒီယာကို အလေးထားဆက်ဆံသွားမယ် မီဒီယာက အဓိကပဲလေ။ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ဘာလုပ် လုပ် ပြည်သူကိုအသိဥာဏ်ပေးနိုင်တာ မီဒီယာကပဲ။ မီဒီယာအများစုကတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်သတင်းပေးတာများတယ် . . .
ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း လူပြောအများဆုံးမှာ ဦးဝင်းထိန်နှင့် RFA အင်တာဗျူးအကြောင်းပင်ဖြစ်သည်ကို အားလုံးအသိပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန် ပြောဆိုမှုအမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်နေသည်မှာ လည်း အရှိန်မသေသေး။ ထိုထိုသော ဂယက်များထန်နေသည့်ကာလအတွင်းမှာပင် ပေါ်ပြူလာနယူးစ်က ဦးဝင်းထိန်အား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ဆုံခဲ့ကာ NLD အစိုးရ တက်လျှင်တက်ခြင်း ပထမဦးဆုံးဆောင် ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၊ NLD အစိုးရလက်ထက် ဆောင်ရွက်မည့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ ပြည်သူတွေ ဘဝမြင့် မားရေးကို NLD က ဆောင်ရွက်ပေးမည့်အစီအစဉ်များ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ဆက်ဆံရေး၊ တပ်မတော်အပေါ်ထားရှိသွားမည့် NLD အစိုးရ၏ သဘောထား၊ ၅၉(စ)သာ ပြင် ဆင်ခွင့်ရခဲ့လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မဖြစ်၊ ဝန်ကြီးဖြစ်ချင်သူများသံအမတ်ဖြစ်ချင်သူများ အတွင်းဝန်ဖြစ်ချင်သူများ၏ ပေးစာများ၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် NLD အစိုးရက မည်သို့စီစဉ်ထားသည် ဆိုခြင်း၊ မီဒီယာတို့အပေါ် NLD ၏ သဘောထား အစရှိသည်တို့ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ဦးဝင်းထိန်က ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းကို စာဖတ်ပရိသတ်အား တင်ပြလိုက်ရပါကြောင်း …
ဒီချုပ် အစိုးရစစဖွဲ့ချင်း စလုပ်မှာက ဘယ်အလုပ်လဲဗျ။
စလုပ်မှာက ဝန်ကြီးဌာနတွေ လျှော့မှာ။ ဝန်ထမ်းတွေတော့ မလျှော့ဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေလျှော့လို့ ဘယ်ဖြစ်မ လဲ။ သူတို့ သက်ဆိုင်ရာမှာ ခွဲပြီးနေရာချထားမှာ။ အချို့ သောဝန်ကြီးဌာနတွေက လိုမှမလိုတာ။ သူတို့ လူသူတို့ ရာထူးပေးချင်လို့ဖွဲ့ထားတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေ။ ဝန်ကြီးအနည်းဆုံး ၁ဝ ယောက် လျှော့သွားမယ်။ အခုဝန်ကြီး ၃၆ ယောက်၊ ဒုဝန်ကြီးက ၁ဝဝ လောက် ရှိတယ်။ အန်ကယ်တို့က ဒုဝန်ကြီးတွေကို ထားချင် မှတောင်ထားမှာ။ ဦးနုအစိုးရရော၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အတွင်းဝန်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ အတွင်း ဝန်တွေက ဝန်ကြီးဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း သူတို့ကရှိနေတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအတွင်းဝန်တွေက ဝန်ကြီးတွေကို အထောက်အကူပြုတာ။ အခုအစိုးရက အတွင်းဝန်လည်းထားတယ်။ ရှုပ်ကုန်ရော အဲ့ဒီမှာ အတွင်းဝန်ဆိုတာတွေကလည်း ဗိုလ်ချုပ်တွေများတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာကလူတွေလည်း ဥပဒေ နဲ့မညီရင်ဥပဒေအတိုင်းသွားမှာပဲ။
ဝန်ထမ်းတွေအတွက် နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရက ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ။
အစိုးရအသစ်တက်လာလို့ ဝန်ကြီးဌာနတွေ ကျုံ့ သွားသော်လည်း ပိုလာမယ့် ဝန်ထမ်းမရှိဘူး။ သူ့နေရာနဲ့ သူ နေရာချထားပေးမယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဒီဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းတွေ အခြားဌာနမှာ အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင် သင်တန်းပေးမယ်။ နောက်တစ်ခုက အထူးသဖြင့် နေပြည်တော်မှာပေါ့။နေပြည်တော်မှာ ဝန်ထမ်းတွေက မနေချင်ဘူး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မရှိဘူး။ နောက်ကလေးတွေရဲ့ ကျောင်း အဲ့ဒါတွေဖြည့် ဆည်းပေးမယ်။ အခုပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ အစိုးရဌာနကြီးကို ရန်ကုန် ပြန်ပြောင်းမလို့ စဉ်းစားသေး တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ရန်ကုန်လမ်းကျပ်တာနဲ့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင် ဘူး။ နောက် နေပြည်တော်မှာနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နေရထိုင်ရချောင်လည်အောင် လုပ်ပေးမယ်။ ပြီးရင်သံ ရုံးတွေလည်း တစ်စတစ်စ ရောက်လာလိမ့်မယ်။ အကုန်မရောက်ရင်တောင် တစ်ပိုင်းတစ်စ ရောက် လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ သူတို့ရောက်လာရင် မြို့အင်္ဂါရပ်ပိုပီသမှာပေါ့။ အခု ဟိုတယ် တွေဆိုလူမရှိဘူး။ အဲ့ဒီလို မြို့အင်္ဂါရပ် ပိုပီပြင်လာတော့မှ လာတဲ့သူ တွေများမှာ။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ အခုသူတို့ လုပ်နေတဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ။ တန်ဖိုးကနည်းမှမနည်းတာ။ ကိုယ်တို့ကလည်း အဲ့ဒါသွားထိရင် ကျား မြီးဆွဲရသ လို ဖြစ်နေတာ။ အဲ့ဒါက ကိုယ်လည်းမကျွမ်းကျင်တော့ သိပ် မပြောနိုင်ဘူး။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရလက်ထက် ဆောင်ရွက်သွားမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းသိပါရစေ အန်ကယ် ဦးဝင်းထိန်ခင်ဗျာ။
ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ အင်မတန်ပြောရခက်တယ်။ ၁ အချက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ လက်မှတ် ထိုးထားတဲ့ ရှစ်ဖွဲ့၊ နောက်လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့မှာလည်း နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ ပလောင်ရယ်၊ ကိုးကန့်ရယ်၊ ရခိုင်ရယ် သူတို့ကိုတော့ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ပြီးဆွေး နွေးတဲ့အဖွဲ့က မကြည်တဲ့ သဘောပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီ ဟာတွေ သောင်းပြောင်းထွေလာတွေကို ဖြတ်ပြီးတော့မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဆိုတာကတော့ အင်မတန်ခက် တယ်လို့ အန်ကယ်က မြင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးက အဲ့ဒီလို ပေါ့။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဃြဗလုပ်တဲ့ ကိစ္စကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရော၊ ကိုယ်တို့ကရော အသိအမှတ်ပြုတယ်။ အသိအ မှတ် ပြုပြီးတော့မှ နောက်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေ ဦး စီးပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်မယ်လို့ ပြောပြီးသား။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိရှိနေတဲ့ MPC ကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်။ ဖျက်မပစ်ဘူး။ အဲ့ဒါလည်း ပြောထားပြီးသား။ တစ်ခုရှိတာကတော့ အခု ၁၂ ၊ ၁၃ ၊ ၁၄ မှာ လုပ်မယ် ပြော ထားတဲ့ ညီလာခံပေါ့။ အဲ့ဒီ ညီလာခံမှာတော့ကိုယ်တို့ သဘောထားကတော့ အရင်အဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ တာကို အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ဒါပဲ။ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အခမ်းအနားပဲလို့ ကိုယ်က ယူဆ တော့မယ်။ တတ်နိုင်ရင် တစ်ရက်တည်းပြီးရင်တောင်မှ ပြီးစေချင်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းလုပ်မှာက ငါးရက်လုပ်မယ်ပြောတယ်။ ကိုယ်တို့က သုံးရက်နဲ့ ပြတ်ပါတယ်ပြောတယ်။ အဲ့ဒါသူတို့နဲ့ ညှိနေကြတယ်။ ဒီပဒိုကွယ်ထူးဝင်း တို့ကလည်း လေးရက်နဲ့ လုပ်ချင်တယ်။ လုပ်ချင်တော့ သူတို့ပြောတာလည်း သဘာဝကျပါတယ်။
သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေ တောက် လျှောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် လေးရက်လောက် ပြောပါစေ။ အန်ကယ်တို့လည်း အဲ့ဒီကျရင် အန်ကယ်တို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သုံးရက်နဲ့ ပြီးစေချင်သော်လည်းပဲ ကိုယ်တို့ကလေးရက် ဖြစ်ချင်တယ်။ အခု ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းတို့က ငါးရက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူး။ ဒီညီလာခံကြီး တစ်ခုလုံးက စကားတွေပြောပြီး ဘာမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်ပြီး လာမယ့်အဖွဲ့မှာ သူတို့က ပြောသွားတာက ဆွေးနွေးမယ့် ဘာသာရပ်တွေကနိုင်ငံရေးပါမယ်။ လုံခြုံရေးပါမယ်။ စီးပွားရေး ပါမယ်။ အခြားလူမျိုးရေးတွေပါမှာ ပေါ့။ နိုင်ငံရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ဆိုင်တယ်။ စီးပွားရေးကတော့မ ဆိုင်ဘူး။ ဖွဲ့ စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးတို့ ဘာတို့ဆိုတာက ဒါလွှတ်တော်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ အစိုးရ ဘာမှထည့်ဆွေးနွေးစရာ မလိုဘူး။ ပြောပြီးတော့ လာမယ့်ညီလာခံက သုံးရက်ဖြစ်မလား။ လေးရက်ဖြစ် မလား။ ငါးရက်ဖြစ်မလားဆိုတာက ခုနကအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိ တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားကတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်မထိုးတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ချင်တယ်။ သူတို့လည်းဖိတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဖိတ်တဲ့ အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တွေ့ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးမှ သိ နိုင်မှာပါ။ တွေ့ချင်တယ်။ သူတို့ ဘက်ကလည်း စာတွေထုတ်ထား တာရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် နဲ့တွေ့ပြီးမှ ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုတာပါတော့အခုကိုယ်တို့က တစ် ပန်းသာမှာကတော့ ကိုယ်တို့ က စေတနာပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်လိုချင်တယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒါကနည်းနည်းရှည်တယ်။
ဒီငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံရေးကစားပွဲလို၊ ကျွန်တော် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းတက် တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ လည်းတက်တယ်။ သူတို့လုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို အဲ့ဒီလို ပဲ ၉၂ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်အလှည့်ကျ ကျွန်တော်ပြောတယ်။ အဲ့ဒါက လက်တွေ့မကျဘူးထင်တယ် ဆိုပြီးတော့။ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတုန်းကပါတီပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် ရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလည်း ပြီးရော ၂ဝ တောင်မကျန်တော့ဘူး။ ကျန်တဲ့ ပါတီက ပြည်သူလူထုထောက် ခံမှု မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီလိုပဲ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၉၂ ပါတီရှိတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဘယ် နှစ်ပါတီကျန်လဲ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှု မရှိတဲ့ပါတီတွေ ကို ပါဝင်သင့် မသင့် စဉ်းစားရမယ်။ ဒါကြောင့် ပါ တီကြီးက အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုပြီး ပြောမှာစိုးလို့၊ ကျွန်တော် ကပြော တာ အဲ့ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးက နိုင်ငံရေး ကစားကွက်မဖြစ်စေချင် ဘူးဆိုတာက ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတော့ သူတို့ကဖိတ်တယ်။ အစိုးရက ၁၆ ယောက် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ က ၁၆ ယောက် နိုင်ငံရေးပါတီက ၁၆ ယောက် အဲ့ဒီတော့ အန်ကယ် ကပြောတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့က ၁၆ ယောက် တိုင်းရင်းသားက ၁၆ ယောက်။ ဒါကိုဝေဖန်စရာမရှိဘူးလို့၊ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီက ၁၆ ယောက်ရွေးတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီကိစ္စကို အခုပြောရတော့မယ်လို့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အန်ကယ်တို့ ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းနိုင် သွားတဲ့ပါတီ။ အဲ့ဒီ ပါတီနဲ့ တစ်ယောက်မှမနိုင်တဲ့ ပါတီကို အတူတူထားရင် ဒါနိုင်ငံရေးအရ သဘာဝမကျ ဘူး။ အဲ့ဒီဟာကို အန်ကယ်ကသဘောမတူဘူး။ အန်ကယ်လိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လည်းသဘောမ တူဘူး ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဟိုဟာထဲကို ဦးသုဝေကို ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌပေးသတဲ့။ ဦးသုဝေက နိုင်ငံရေးဝါရင့်တဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတော့ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ပါတီက ၁ ယောက်မှမနိုင်ဘူး။ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပေးတယ်ဆိုကတည်းက ဒါက နိုင်ငံရေး ကစားသလိုဖြစ်သွားပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သမ္မတနဲ့တွေ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာဆိုရင် အာဏာသိမ်းဖို့အထိ ပြောတဲ့ လူတွေရှိတဲ့ ပါတီတွေပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လူတွေသူတို့အသုံးမချဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အန်ကယ်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ် တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးမကစားရဘူး။ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ရော၊ ကိုယ်ရော အမြဲပြောတယ်။
အဲ့ဒီတော့ နောင်အစိုးရဖွဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် NCA ကို တကယ်တမ်း NCA ပီသသော Nation Wide ဆိုတာ တကယ် Nation Wide ဖြစ်မှလေ။ အခုဟာက နေရှင်းဝိုက်မဟုတ်ဘူး။ Partial Ceasefire အဲ့ဒီ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့က အခုနက ရခိုင်တို့၊ ကိုးကန့်တို့၊ ပလောင်တို့ အကုန်ပါမှဖြစ် မှာလေ။ သို့သော်လည်း ပြောတာသာ လုပ်တာခက်တယ်။ ဘာကြောင့်ခက်လဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးက အပြိုင်သွားမှာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်တဲ့အခါမှာ အနာဂတ်မှာ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင် စုပေါ်ဖို့ ငြိမ်း ချမ်းရေးဟာ တစ်နေရာရာမှာ သွားဆုံမှာ။ အဲ့ဒီလိုသွားဆုံမှ ငြိမ်း ချမ်းရေးက အကောင် အထည်ဖော် လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့လုပ်ဖို့အတော်ခက်လိမ့်မယ်။ ဒေါ်စုလည်းသိပြီးပြီ။ ကိုယ်တို့လည်း သိပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားလုပ်မယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝမြင့်မားအောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင် ပေးမလဲခင်ဗျ။
ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ကို ပြည်သူတွေ ကထောက်ခံတယ်။ ထောက်ခံတာမှာ ထောက်ခံတာကတစ်ပိုင်း မျှော်လင့်တာက တစ်ပိုင်း။ ပြည်သူ တို့မျှော် လင့်တာကို ဖြည့်ဆည်းဖို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်။ ကိုယ်တို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ တာ ဝန်။ အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းရမလဲဆိုတော့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတက်တက်အောင်လုပ်ဖို့၊ နောက် တခြားအရေးကြီးတာ တွေရှိတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကိစ္စတွေ။ ဒါပေမဲ့ ထိ ထိရောက်ရောက်ဖြစ်စေမယ့် ဟာက ပြည်သူလူထုရဲ့ စားဝတ် နေရေး တိုးတက်ဖို့၊ တိုးတက်ဖို့ က ပြောတော့သာ လွယ်တာလုပ် တော့ ခက်တယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာ ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်းတို့၊ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်တို့ ခန့်တာပဲ။ သိသိ တာတာကြီးတိုးတက်လာတာ သိပ်မတွေ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ တခုရှိတာက အန်ကယ်က စီးပွားရေးမ ကျွမ်းကျင်တော့ သိပ်မပြောတတ်ဘူး။ ကိုဟံသာမြင့် နဲ့ စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေ လုပ်တာရှိတယ်။ ကိုယ်တို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာချက်မှာလည်း စီးပွားရေး ပေါ်လစီတွေ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာက အန်ကယ်တို့ သေ ချာ လူတွေရွေးနေတယ်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်မရွေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဓိက ချို့ယွင်းချက်က အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူနည်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့ ကသာတာက စေတနာရှိတယ်။ ပြည်သူလူထုအတွက် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စေတနာရှိတယ်။ အဂတိတရား အင်မတန်နည်းမယ်။ နည်းမယ်ဆို တာက အဂတိတရား မဖြစ်ရဘူး ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လူတွေရှိသလို ဥက္ကဋ္ဌ ကြောက်လို့လည်း လုပ်ရဲ မှာမဟုတ်ဘူး။ ဥက္ကဋ္ဌ ကြိမ်းထား ပြီးပြီလေ။ အဂတိတရားဖြစ်လို့ကတော့ ဘယ်သူမှမညှာဘူး။ ထောင် ချပစ်မယ်။ ချမှ။ မချလို့ မရဘူး။ အဲ့ဒီလိုဆန်ရင်းနာနာဖွတ်မှ၊ ကိုယ် လူတွေက ကျားကုတ် ကျားခဲနဲ့နေ မှ အောင်မြင်မှာ။
အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီတော့ ပြည်သူရဲ့ စားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့က အခု လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးပြင်စရာရှိတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ခုနပြောသလို ပေါ့၊ စေတနာရယ် အဂတိတရား နည်းပါးမှုရှိကြောင်း၊ အမှားတွေ့ မယ်ဆိုလည်း ပြည်သူလူထုက စာနာမှုပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် တာပေါ့။ အန်ကယ်ကတော့အစိုးရ အဖွဲ့မှာ ပါမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ မပါဘူးလို့လည်း ဒေါ်စုကိုပြောထားပြီး ပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွေးကောက် ပွဲဝင်လိုက်တော့ အမာခံတော် တော်များများက လွှတ်တော်ထဲ ရောက် သွားပြီ။ ပါတီကဟာသွားပြီ။ အဲ့ဒီဟာတဲ့နေရာ ပြန်ဖြည့်ဖို့။
ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်။ အတွေ့ အကြုံရှိတဲ့သူတွေ ရွေးနေတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကပါမယ်၊ ဘယ်ကပါမယ်၊ အများကြီး မှန်းပြီး ပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲ့ဒီအပေါ်ကိုရော။
အခုက ဒီလိုလေ အမျိုးသားရော၊ ပြည်သူရော အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအများကြီးဆို တော့ ဘယ်သူ့မှ မပါဘဲဖွဲ့လို့ရတယ်။ ဘယ်သူ့မှ ပါစရာမလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောထား သလို အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးက သင့်တော်တဲ့သူတွေပါမယ်။ တိုင်း ရင်းသားတွေ ထဲက ပါမယ်။ အများ ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူချထားတဲ့ မူဝါဒအတိုင်း ကိုက်ညီတဲ့၊ ပြည်ခိုင် ဖြိုးမှ မဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ပါတီထဲ ကသင့်တော်တဲ့သူပါမယ်။ တိုင်းရင်း သားတွေထဲကပါမယ်။ ဒါမှအမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်မှာပေါ့။ အဲ့ဒီ ထက် ပိုအရေးကြီးဆုံးကတော့ တပ်မတော်နဲ့ ပြေလည်ဖို့ပဲ။ အခု ထိတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေးက ကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်အနာဂတ် ဖွဲ့စည်းပုံပြင် ဆင်ရေးက သူတို့သဘောတူမှ ရတာကိုး။ အဲ့ဒါကြောင့် ပြင်လို့ရရင် ရ၊ မရရင် ဆိုင်းငံ့လို့ ရရင်ရ။ ဒါကြောင့်တပ်မတော်နဲ့ဆက်ဆံရေးက အဓိကအကျဆုံးပဲ။
ဒါဆိုရင် ကာချုပ်ကြီးနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက်ဆံရေးက တော်တော်လေးပြေလည်မှုရှိတဲ့ သဘောလားဗျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မဟာဗျူဟာတွေကြောင့်ပေါ့။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့တယ်။ တပ်ချုပ်နဲ့ တွေ့တယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့တွေ့တယ်။ အဲ့ဒီ အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး သန်းရွှေက အစိုးရအဖွဲ့မှာ မပါဝင်မပတ်သက်တော့ဘူး။ သို့သော် ဒီသမ္မတ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကာချုပ် သူခန့်ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီတော့ သူက သြဇာရှိတယ်။ သြဇာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သူလိုလူရဲ့ သဘောတူညီမှု လိုတာပေါ့။ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုရော၊ နိုင်ငံတကာရော တုံ့ပြန်ချက်က ကောင်းတယ်။ ဒါက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကိုသွားဖို့ ခြေလှမ်းစလိုက်တာပဲ။
ဒါဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးက နောက်စမယ့် လွှတ်တော်အတွင်း သက်ရောက်နိုင်တာပေါ့။
အဲ့ဒါက မြေစမ်းခရမ်းပျိုးပေါ့။ ဖိအားတော့ပေးလို့ မရဘူး။
နောင်တက်လာမယ့် ဒီချုပ် အစိုးရ အနေနဲ့ တပ်မတော်အပေါ်ထားရှိ သွားမယ့် သဘောထား ကို ပြောပြ ပေးပါခင်ဗျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ခဏခဏပြောတယ်လေ။ သူ့အဖေတည်ထားတဲ့ တပ်မတော်၊ ငယ် ငယ်လေးကတည်းက တပ်မတော် အပေါ် သံယောဇဉ်ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာ တပ်မတော်ကို စော်ကားတဲ့စကား မျိုးတစ်ခါမှ မပြောဖူးဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တပ်မတော် ကို ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်စေ ချင်တယ်။ ခေတ်မီသောတပ်မတော် ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ ဆန္ဒ။ အဲ့ဒီဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ ရေ ရှည်မှာတပ်မတော်နဲ့ ဆက်ဆံရေး က မကောင်းလာစရာ မရှိဘူး။ ကောင်းလာဖို့ပဲ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အရင်တုန်းကဖြစ်တဲ့ ပြဿနာက တပ်မတော်နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ လူနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ထဲကဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲ အနိုင်ရတဲ့သူပဲ ခန့်ရမယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဆိုရင် အနိုင်ရတဲ့သူရော၊ တခြားကရော ခန့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေပါသလဲ။
ပြောလို့မဖြစ်သေးတဲ့ အချိန်မို့သာ မပြောတာ။ ရွေးချယ်နေပါတယ်။ အဓိကစံနှုန်းကတော့ တိုင်းပြည်ချစ်ဖို့၊ နိုင်ငံချစ်ဖို့၊ အထူးသဖြင့် အမှားနည်းနိုင်သမျှနည်းသူကို ရွေးနေပါတယ်။
အခု ကိုယ်စားလှယ်တွေအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းတွေ ပေးနေပြီဆိုတော့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အရည်အသွေးပိုင်းဘယ်လို ရှိလဲဗျ။
အန်ကယ်တို့စာရင်းတွေလုပ် ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်က ၇ဝ လောက်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ ၅ဝ ကျော်လောက်ပါတယ်။ နောက် ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူက ၄ဝ၊ ၅ဝလောက်ပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့က ၃ဝ လောက်ပါတယ်။ နောက် အခြားမေဂျာတွေနဲ့ကလည်းပါတယ်။ ၇ တန်း၊ ၈ တန်း ပါတယ်။ လယ်သမားတွေပါတယ်။ နောက် ပေါင်ပြတ်သူပါပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အရည်အသွေး ရှိပြီးသား။ သို့သော်လည်း ပင်ကိုအရည်အသွေးတွေကို နိုင်ငံရေးအသိနဲ့ ပေါင်းပေးဖို့၊ အခုသင်တန်းတွေက လည်း ဒါပဲ။ နောက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တွေရောက် လာရင် အရင်လူဟောင်းတွေက သူတို့ အတွေ့အကြုံတွေပြန်မျှဝေမှာ။
၅၉ (စ)သာ တကယ်လို့ ပြင်လို့ရခဲ့ ရင် ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတဖြစ်မှာပေါ့။
သမ္မတမဖြစ်ရင် ပါတီကိုဆက်ခေါင်းဆောင်မယ်။ သမ္မတဖြစ်ရင် ပါတီက ထွက်ရတော့မယ်။ အဲ့ဒါ ပြဿနာ ကိုယ်စားလှယ် ၃၉ဝ လုံး မှာ၊ ပါတီမှာက အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူက တော်တော်များတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပါတီက ဟာသွားပြီ။ ဖြည့်ဖို့အတွက်လည်း ကိုယ်တို့က စိတ်ကူးရှိထားပြီးသား။ လူငယ်တွေထဲက ဟိုတုန်းကတော့ လူငယ် ကို ၃ဝ လို့သတ်မှတ်ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းဖိနှိပ်မှုများလာလို့ လူငယ်ကို ၃၅ နှစ်လို့ပြောင်း သတ်မှတ်ရတာရှိတယ်။ ၃၅ နှစ်အောက် က ကလေးတွေက နိုင်ငံရေး သင်တန်းတွေ၊ နောက် Public Policy သင်တန်းတွေပေးမှာ၊ ပေးဖို့လည်းရှိတယ်။
လူနေအိမ်တွေမှာ ရုံးခန်းတွေ ဆောက်ရတော့ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေရဲ့ လစာဖြတ်ပြီးရုံး ခန်းဆောက်မယ်လို့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာရော။
ဟုတ်တယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်မှာ။ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း။ အဲ့ဒီထက်မြင့်လို့ ဝန် ကြီးဘာညာ ၅ဝရာခိုင်နှုန်းဖြတ်မှာ။ အဲ့ဒီရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ပါတီရုံးတွေ တည်ဆောက်မှာ။ ဘာလို့လဲဆို တော့ အခုက ပါတီရုံးတွေ ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်ရင်တချို့က စေတနာနဲ့ ငှားတာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအ ပေါ် စေတနာ တင်မဟုတ်ဘူး။ ပါတီကို ခြယ်လှယ်လာတာတွေ ခဏခဏကြုံတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ရတဲ့ပိုက်ဆံကို ပါတီရုံးတွေ ဦးစား ပေးမယ်။ အခုတစ်လုံးတစ်ခဲတည်း နိုင်ငံရေးပင်စင် ကိုယ်တို့ဆီက အားလုံး မယူဘူး။ စုပြီးတော့မှ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး တစ်ခုခု လူထုအကျိုးပြုမယ့်ဟာကိုလှူမှာ။ အဲ့ဒီဟာ ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးမယ်။ ကိုယ်တို့လည်း ဝိုင်းစဉ်းစားပေးမှာ ပေါ့။ အဲ့ဒါယူရတာ စိတ်မသန့်ဘူး။ အဓိပ္ပာယ်မှ မရှိဘဲနဲ့။ လခတိုးတုန်း ကလည်း ကိုယ်တို့ သဘောမတူခဲ့ဘူး။ စိတ်လည်း မဝင်စားဘူး။ လခတိုးဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်တာ။ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တော့ မယူလို့မရဘူး။ အခု ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင်လည်း မယူလို့မရတော့ဘူး။
အန်ကယ် ဦးဝင်းထိန်ဆီကိုတောင်မှ ဝန်ကြီးနေရာတောင်းတဲ့စာတွေ ရောက်နေတယ်သိရပါတယ်။
နှစ်ပိုင်းရှိတယ်လေ။ တစ်ပိုင်းကတော့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ဖို့က အရည်အချင်းရှိသူမှန်သမျှ ဒီချုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ပြီး အသုံးပြုဖို့ မူလည်းရှိတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းက ဒီမိုကရေ စီရဖို့ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ လက်လေးတောင်မမြှောက်ဖူးတဲ့ သူတွေ၊ လျှောက်လွှာတင်တဲ့သူတွေရှိတော့ ရယ်ရခက်၊ ငိုရခက်ပေါ့။ အဲ့ဒီဟာမူအရ တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးကျမယ်ဆိုပါတီဝင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားတွေလည်း သုံးမှာ။ သို့သော် ရာထူးလို ချင်တယ်ပြောတဲ့ သူတွေကို ဘယ် လိုစဉ်းစားလို့ရမလဲ။ အဲ့ဒါပဲ ဒါက ပြည် သူကိုအကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့အကျိုးအတွက်။ လျှောက်လွှာတွေ ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိတယ်။ အမြဲ တမ်းအတွင်းဝန်တောင်ပါသေးတယ်။ သံအမတ်တွေလည်းပါတယ်။ဝန်ကြီး ဖြစ်ချင်တဲ့သူပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီပြောပြ တော့ သူကရယ်တယ်။ လာတောင်း ဆိုတဲ့သူက လေးငါးဆယ်တော့ မရှိဘူး။
မီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်လို့က ကိုယ်ပြောတယ်မို့လား။ ဦးမြတ်ခိုင်က မေးဖူးတယ်။ ခင်ဗျားအကြောင်း ကျွန်တော်ရေးရင် တရားစွဲမလားတဲ့။ မစွဲဘူးလို့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်အချက်အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ကိုယ်တို့ပြောချင်တာကို မီဒီယာရှိ မှပြောလို့ရတာ။ ခင်ဗျားတို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ရှိမှ ရေးလို့ရတာ။ အဲဒီလို ဟိုတလောကပြောတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ဝေဖန်တယ်။ ဝေဖန်တယ် ကိစ္စမရှိဘူး။ ငါ့ပြောရကောင်း လား၊ ဒေါသဖြစ်ရင် ကိုယ်ပဲအရူးဖြစ်မှာ။ သူတို့ ရည်ရွယ်ချက် ဘယ်လိုရှိရှိ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ ကိုယ်က ထောင်ကျတာများလို့ ဘယ်ကောင်ဘယ်အချိုးကိုတန်းသိတယ်။ အစိုးရသစ်မှာ မီဒီယာကို အလေးထား ဆက်ဆံသွားမယ်။ မီဒီယာက အဓိကပဲလေ။ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ဘာလုပ် လုပ် ပြည်သူကို အသိဥာဏ်ပေးနိုင်တာ မီဒီယာကပဲ၊ မီဒီယာအများစုကတော့ မှန်မှန်ကန်ကန် သတင်းပေး တာများတယ်။ ဒီဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောတာ တော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ဒါ လူ့သဘာဝပေါ့။